IOS 14.5 waxay dhex gali doontaa nidaamka dib u habeynta xaalada bateriga | Wararka IPhone
IOS 14.5 waxay dhex gali doontaa nidaamka dib u habeynta xaalada batteriga
Angel Gonzalez | 01/04/2021 13:00 | macruufka 14, Noticias
macruufka 14.5 ujeedkiisu yahay inuu noqdo jawharad taajkii cusboonaysiinta weyn ee iOS 14. Maalmo ka hor, betas cusub ayaa loo sii daayay horumariyeyaasha. Si kastaba ha noqotee, tan iyo beta-kii ugu horreeyay ee noocan ah waxaan aragnay war weyn sida suurtagalnimada furitaanka iPhone-ka ee Apple Watch, codad cusub oo loogu talagalay Siri, qalab cusub oo ku jira Apple Music iyo emoji cusub, iyo warar kale oo waaweyn. Beta-kan cusub ayaa tilmaamaya nidaamka dib u hagaajinta xaaladda batteriga. Waxaa loo heli doonaa oo keliya 11, 11 Pro iyo 11 Pro Max sabab aan maanta ogayn.
Dib-u-habaynta caafimaadka bateriga ee soo socota xilliga gu'ga oo ay weheliso macruufka 14.5
Cusbooneysiintu way dhacdaa, sidaan soo sheegnay, kaliya iPhone 11, 11 Pro iyo 11 Pro Max. Apple waxay u egtahay inay ula dhaqanto qaabkan tijaabo si loogu balaariyo aaladaha kale. Waxaan ugu dambeyntii arki doonaa sida ay ula dhaqanto moodooyinka kale, oo ay ku jiraan iPad-ka. Muuqaalka ayaa la imanaya beta lixaad ee iOS 14.5 oo la sii daayay maalmo ka hor. Waxay ku saabsan tahay a nidaamka cabirka xaaladda batteriga, si loo cusbooneysiiyo xaaladda caafimaad iyo waxqabadka ugu sarreeya.
IOS 14.5, oo la sii deyn doono guga dambe, ayaa waxaa ka mid ah cusbooneysiin taas oo nidaamka ka warbixinta caafimaadka batteriga uu dib u qiimeyn doono awoodda ugu badan ee batteriga iyo awoodda waxqabadka ugu badan ee iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max si wax looga qabto qiyaasaha aan saxda ahayn ee caafimaadka batteriga. warbixinnada isticmaalayaasha qaarkood.
Nidaamkan dib u habeynta waxaa loogu talagalay kuwa adeegsada waxay ka arkayaan habdhaqan lama filaan ah baytarigooda iPhone oo aan u dhigmin xaqiiqda xogta ku jirta warbixinta caafimaadka batteriga ee ku jirta "iOS Settings". Apple ayaa ku xustay, websaydhada taageerada, in si kasta oo ay tahay macluumaadka uu bixiyo nidaamkan kama tarjumeyso dhibaatada ka jirta xaaladda dhabta ah ee batteriga.
Betas-ka lixaad ee iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 iyo watchOS 7.4 ayaa hada loo sii daayay horumariyeyaasha.
Xaqiiqdii, dib u soo nooleynta waxay socotaa dhowr toddobaad, dhamaadka, iyadoo kuxiran natiijooyinka la helay, waxaa lagugula talinayaa inaan aadno alaab-qeybiyaha ay idman tahay Apple si uu u qiimeeyo batteriga shaqsi ahaan. Sidoo kale, dib u soo nooleynta ayaa laga yaabaa inay guul darreysato waana in mar kale la sameeyaa. Sida laga soo xigtay Apple, socon doonaa dhowr toddobaad iyo dhammaantood ma arki doonno wax cusbooneysiin ah oo ku saabsan xogta caafimaadka, laakiin waa la beddeli doonaa daraasadda ka dib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » IOS 14.5 waxay dhex gali doontaa nidaamka dib u habeynta xaalada batteriga
Mar dambe kuma sii jiri doonno Siri cod dumar ah, hadda waa inaan kala dooranno lab iyo dheddig
Microsoft waxay ka saareysaa barnaamijka Cortana ee iOS iyo Android